यसरी सिंगापुर पुगेका थिए किम जोङ उन (भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
यसरी सिंगापुर पुगेका थिए किम जोङ उन (भिडियो)
एजेन्सी। उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उन आइतबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन सिंगापुर गरेका छन्। किमले आफ्नो सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा घेरमा सिंगापुरमा प्रवेश गरेका हुन्।
किमको रहस्यमयी दुनियाका सुरक्षाकर्मी दोस्रो पटक यसरी देखिएका हुन्। किम सिंगापुर पुग्दाको क्षणको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ। जसमा किमका सुरक्षाकर्मीले किम चढेको गाडीलाई घेर्दै सँगै दौडिरहेको देखिएको छ।
भिडियोमा कालो सुट र टाई लगाएका सुरक्षाकर्मी किम चढेको मर्सिडीज कारसँगै दौडिरहेको देखिएको छ। यसअघि गत अप्रीलमा कोरिया सम्मेनका क्रममा किमका सुरक्षाकर्मीले यसैगरी सबैको ध्यान आकर्षित गरेका थिए।
उत्तर कोरियाका नेता किम हाई–टाइट सुरक्षाकालागि चर्चित छन्। उत्तर कोरियामा पनि किम सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा यसैगरी सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिने गर्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमका अनुसार किमका सुरक्षाकर्मीको चयन उनीहरुको सुन्दरता, फिटनेस हेराइ र कौशलको आधारमा गरिन्छ। किमसँग छुट्टा छुट्टै ६ स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जुन विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली सुरक्षा व्यवस्थामध्ये एक हो। जुन सुरक्षा घेरामा एउटा कमिलो पनि पस्न सक्दैन। ट्रम्प पुग्नु भन्दा पहिला नै किम सिंगापुर पुगेका थिए।
भारतीयले यसरी गरे नेपालको बेइजत, १५ मिनेटको भिडियोमा १५ झुठ (भिडियो रिर्पोट)
तौल र गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिँदै